Q: Goorma ayaan helayaa kaarka WIC?
A: Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay arrintan sidoo kale! Fadlan weydii shaqaalaha WIC marka ay kaararka WIC u yimaadaan xafiiska WIC ee xaafaddaada.
Q: Maxaan u arki karin faa'iidooyinka cuntada ee WIC?
A: Waxaan ka shaqeyneynaa inaan kuugu xirno faa'iidooyinka cuntada ee WIC leh barnaamijka WICShopper. Waxaa jira waxyaabo aan u baahanahay inaan marka hore sameyno si aan u hubino in macluumaadkaagu yahay ammaan. Tani waxay noqon doontaa wax aan rajeyneyno inaan kuu helno mustaqbalka!
Oggol - Qalabkan waxaa loo oggol yahay WIC Washington. Waa hab fiican in la ogaado haddii cunto WIC la oggol yahay. Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato waa inaad arki kartaa sheyga la ogol yahay, laakiin ma aha mid ku jira faa'iidooyinka cuntada ee WIC, markaa ma iibsan kartid WIC. Ilaa illaa WIC faa'iido u xirto barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" laguma dabaqi karo manfacyada qoyskaaga. Tusaale ahaan, ilmo hal sano jir ah wuxuu helayaa caano dhan. Haddii aadan haysan ilmo sannad jir ah oo qoyskaaga ka mid ah, caanaha oo dhan ma noqon doonaan qayb ka mid ah faa'iidooyinka cuntada ee WIC, adiguna ma awoodi doontid inaad caano ka iibsatid boosteejada.
Ma aha wax WIC ah - Taas macnaheedu waa Washington WIC ma ansixin sheygan. Haddii aad u maleyneyso inaad awoodi doontid inaad cuntadaas ku iibsato faa'iidooyinka cuntada WIC noo soo sheeg adiga oo isticmaalaya "Anigu ma iibsan karno!" [HC (3) oo ku yaala appkan.
Liiska Raashinka WIC ee Washington